Rushmore တောင်တန်း | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | အမေရိကန်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
အတော်များများကပို့စကတ် အမေရိကန် အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံလူသိများလာကြပြီနှင့်ယနေ့ကျွန်တော်စာရင်းတစ်ခုထပ်မံထည့်ပါ: Rushmore တောင်။ မျက်နှာများနှင့်အတူတောင်ကြီးကပေါ်မှာထွင်း! အကယ်စင်စစ်သင်သည်သူ့ကိုရုပ်ရှင်မှမှတ်မိသော်လည်းသင်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသင်မသိပါ၊ သို့မဟုတ်သူတို့ကတိုင်းပြည်၏သမ္မတများဖြစ်ကြောင်းသင်မှတ်မိသည်မဟုတ်ပါ။
အမှန်မှာ၊ Rushmore တောင်သည်နိုင်ငံတကာခရီးသွား destination ည့်သည်မဟုတ်သည့်ဒေသဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းဒေသအလိုက်ဖြစ်သည်။ တစ်သက်တာတွင်အမေရိကန်တစ် ဦး စီသည်သွားလိုသည်သို့မဟုတ်ကြည့်ချင်သည်။ ဒီဟာကဘယ်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး လဲဆိုတာဒီနေ့ကြည့်ရအောင်။
1 Rushmore တောင်
2 Rushmore တောင်ကိုလည်ပတ်ပါ
တကယ်တော့လူတစ်ယောက်ကအဲဒါကိုတောင်လို့ရိုးရိုးလေးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်တောင်ကတောင်ဖြစ်လာတယ် ရာမပန်းပု ensemble နှင့်အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုင်၌တည်၏။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၎င်းသည်၎င်း၏ပထမဆုံးနှစ်ရာပြည့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့သည် ဒါဟာ 1927 နှင့် 1941 အကြားထွင်းထုခဲ့သည်.
တောင်က တောင်ဒါကိုတာ၌တည်၏ နှင့်လေးယောက်ရဲ့မျက်နှာများကိုကိုယ်စားပြုတယ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဥက္ကidents္ဌများဖြစ်သောဝါရှင်တန်၊ ဂျက်ဖာဆန်၊ Roosvelt နှင့်လင်ကွန်း။ သား 18 မီတာအမြင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် နှင့်ဒိန်းမတ် - အမေရိကန်ပန်းပုဆရာ၏လက်မှတ်ကိုထမ်း Gutzon Borglum နှင့်သူ၏သားလင်ကွန်း။
အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး နိုင်ငံ၏မွေးဖွားမှုနှစ် ၁၅၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်။ ဦး ခေါင်းတစ်ခုစီသည်ပျမ်းမျှ ၁၈ မီတာသာရှိသည် နှာခေါင်းကခြောက်မီတာပါ။ မျက်လုံးသည်အဆုံးမှအဆုံးသို့ ၃.၄ မီတာအကွာတွင်ရှိပြီး ၄ င်းတို့၌ကျောင်းသား၏ကျောက်လွှာကျောက်လွှာရှိသည့်သက်တမ်းတစ်ခုရရှိရန်မှာ ၅၆ စင်တီမီတာဖြစ်သည်။ နေအပေါ်သို့ရောက်သောအခါတောက်ပမှုနှင့်အရိပ်အချို့ရှိသည်။
အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး မှာ အလုပ်သမား ၄၀၀ ပါ ၀ င်ခဲ့သည် နှင့်ဆရာ Borglum သည်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ကိုမပြီးစီးမီ ၁၉၄၁ တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏သားမှာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကနောက်ဆုံးအချက်အလက်များအားပြောပြခဲ့သည်။ Rushmore Mount ဖြစ်သည့်မည်သည့်ရုပ်ရှင်များသို့မဟုတ်တီဗီဇာတ်လမ်းများပေါ်ထွက်လာသည်ကိုသင်စဉ်းစားပါသလား။ ကောင်းပြီ ပျောက်ဆုံးသောဘဏ္Treာ၏ပုံပြင် 2က Nicholas Cage နှင့်အတူ Superman II, Mars Attacks, Richie Ricón, Futurama, Family Guy...
သိရုံပဲ, ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်သမ္မတများစွာရှိသော်လည်းထိုလေးခုသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့လက်မှတ်တွေပေါ်လာတဲ့သူတွေပေါ့။ ဘယ်သူတွေလဲ အတိုချုပ်အားဖြင့် George Washington ကို ၁၇၃၂ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၇၉၉ တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်မှလွတ်လပ်ရေးအတွက်အမေရိကန်တော်လှန်ရေးကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်ကို ၁၇၄၃ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၈၂၆ တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း၏ပထမဆုံးစာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုပိုမိုကြီးထွားစေရန်ပြင်သစ်မှ Louisiana ကိုဝယ်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်။
Theodore Roosvelt သည် ၁၈၂၈ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၁၉ တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ၂၀ ရာစုအစတွင်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ Abraham Lincoln ကို ၁၈၀၉ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၈၆၅ တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူကကွဲပြားသောပြည်နယ်မဟုတ်သလိုကျွန်စနစ်မရှိသင့်ကြောင်းခံယူချက်။
တောင်ကြီးတောင်ငယ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှအပတစ်နှစ်လျှင်ခုနှစ်ရက်တစ်ပါတ်လုံးဖွင့်လှစ်ပါ။ အကယ်၍ ထိုနေ့၌ရာသီဥတုကောင်းလျှင်ပန်းခြံနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖွင့်သော်လည်းအဆောက်အ ဦး ကိုပိတ်ထားလျှင်ကောင်းပါသည်။ အောက်မေ့ဖွယ်နှင့်အဆောက်အအုံကိုနံနက် ၅ နာရီမှည ၉ နာရီအထိဖွင့်လှစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်စင်တာကိုနံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအထိဖွင့်လှစ်သည်။ ယနေ့ Sculptor စတူဒီယိုကိုပိတ်ထားသည်။ Rushmore တောင်၏အလင်းသည်မိုk်းမလင်းမှီ မှစ၍ ည ၉ နာရီအထိဖြစ်သည်။
Rushmore တောင်ကိုသွားရန်ကျောင်းဝင်ခွင့်ပေးပါသလား။ မဟုတ်ဘူးပန်းခြံထဲသို့ဝင်ရန်ဟုတ်ကဲ့။ နေရာတွင်ကားရပ်နားရန်နေရာကျယ်စွာရှိသောကြောင့်အများပိုင်မဟုတ်သောကြောင့်သင်ငွေပေးရသည်။ ကုန်တင်ကားတစ်စီးလျှင် ၁၀ ဒေါ်လာကုန်ကျသည်။ စီးပွားဖြစ်ဘတ်စ်ကား ၅၀ ပေးဆောင်ရပါတယ် ဘွတ်ကင်လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး တစ်ညမှနောက်တစ်ညသို့ညဥ့်နက်ကားရပ်နားရန်ခွင့်မပြုပါ။
ဖြတ်သန်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အချို့ရှိပါသည် အမျိုးသားနှင့်ဖက်ဒရယ်ပန်းခြံများ၏နှစ်ပတ်လည် Pass ကိုအဆိုပါ နှစ်ပတ်လည်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဖြတ်သန်းမှုအဆိုပါ Senior Pass နှင့် ကလေးသုံးခွင့်လက်မှတ်။ အားလုံးကဝင်ပေါက်ကိုဖုံးပြီးအချို့ကိစ္စများတွင်ကားရပ်နားရာနေရာမဟုတ်ဘဲစခန်းများ၊
ခရီးသွား more ည့်ပိုမိုများပြားလာသည့်နှစ်၏အချိန်များမှာဇွန်လ၊ ဇူလိုင်နှင့်သြဂုတ်လ၊ စက်တင်ဘာလနှင့်အောက်တိုဘာလတို့တွင်ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်လျှင်လူသုံးသန်းခန့်လာရောက်လည်ပတ်သည်။ ကံဆိုးသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့်ထိုသို့မသွားနိုင်ပါ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေဖြစ်ရင်ကားငှားဖို့ဒါမှမဟုတ်ခရီးသွားဖို့ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။
သတင်းအချက်အလက်စင်တာသည်ပထမဆုံးရပ်တန့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုက်၏အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်အရာရာတိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းနိုင်သည်။ ထို့နောက် Great Terrace အောက်တွင် Lincoln Borglum Vis ည့်သည်စင်တာရှိသည်။ ၎င်းတွင်ရုပ်ရှင်ရုံနှစ်ခု၊ ပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်ရှိသည်။ မိနစ် ၂၀ ကြာရုပ်ရှင်ကိုအခန်းတိုင်းနှင့်ပန်းပုဆရာ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြသသည်။ ပန်းပုစင်တာသည်ပန်းချီဆရာလုပ်သည့်နေရာနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ၏စံပြမော်ဒယ်များရှိသည်။ နွေရာသီတွင်အလုပ်သမားများနှင့်နည်းစနစ်များအကြောင်း ၁၅ မိနစ်ကြာဆွေးနွေးချက်ရှိသည်။
ဤလည်ပတ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ - နှစ်နာရီသာရနိုင်သည် အကြံပြုတိုက်နယ်အောက်ပါဖြစ်ပါတယ်:
Sculptor ၏စတူဒီယိုသို့ သွား၍ ၁၅ မိနစ်ကြာဟောပြောချက်ကိုနားထောင်ပါ။ ထို့နောက်သမ္မတ၏စမ်းသပ်မှုမှအဆင့် ၄၂၂ ဆင့်ကိုဖြတ်သန်းပြီးကောင်းမွန်သောရာသီဥတုနှင့်အတူသင်ကပန်းပုလက်ရာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေနိုင်သည်။ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိကော်ဖီနှင့်ရေခဲမုန့်နှင့်နီးကပ်စွာအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ယူပါ။ သင်အချိန်ပိုပေးနိုင်သည် အသံလမ်းညွှန်ကိုငှားပါ ဂီတ၊ အင်တာဗျူးများ၊ အသံသက်ရောက်မှုများနှင့်ပန်းပုဆရာများ၊ အမေရိကန်အင်ဒီးယန်းများနှင့်အလုပ်သမားများ၏မူရင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများပါဝင်သည်။ ၆ ဒေါ်လာကုန်ကျတယ်
တစ် ဦး လည်းရှိပါသည် Multimedia Tour ၎င်းသည် ၈ ဒေါ်လာကုန်ကျပြီးဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုများပါ ၀ င်သည်။ သင့်အားပေးအပ်ထားသော iPhone သို့မဟုတ် Android မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ပြီး GPS မြေပုံပါသောစက်၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သင်မြင်နိုင်၊ နားထောင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အချို့သောအားလပ်ရက်များ၌သင်သွားလျှင်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကဲ့သို့သောအထူးလုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » အမေရိကန် » Rushmore တောင်